Filtrer les éléments par date : jeudi, 09 janvier 2020
jeudi, 09 janvier 2020 19:49
Sambava - 65 000 Ariary: Nitokona nanoloana biraon'ny CISCO ny mpampianatra
Io maraina io no nanao fitokonana ireo mpampianatra teto Sambava, izay nanambara fa tsy mbola nahazo na dia Ariary tamin'io vola avy tamin'ny filoham-pirenena io ka noho izany dia nitaky ny mangaraharaha izy ireo amin'ny fitsinjirana izay vola izay. Nahoana izahay no tsy mbola nahazo hatramin'izao?
Nanao fanairana ireo tompon'andraikitra mivantana ny mpampianatra nitokona mba hamoaka haingana ny marina rehetra momba ity ka miato aloha ny fampianarana aty amin'ny Faritra SAVA eo ampiandrasana izany.
jeudi, 09 janvier 2020 15:47
Langosta: Misy fe-potoana ny fanjonoana sy famarotana azy
Ny Ministeran'ny fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono dia mampatsiahy ny mpandraharaha, ny mpitatitra, ary ny mpanjifa rehetra, fa misy fe-potoana azo anjonoana, hitaterana, hamarotana sy hividianana ny Oratsimba na langosta.
Voarara manomboka ny 01 janoary vao maraina ka hatramin'ny 31 marsa misasak'alina ho an'ny Faritra: Androy, Anôsy, Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fito Vinany.
Voarara kosa manomboka ny 01 oktobra vao maraina ka hatramin'ny 31 desambra misasak'alina ho an'ny Faritra Atsinanana, Analanjirofo, SAVA, DIANA, Sofia, Boeny, Melaky, Menabe ary Atsimo Andrefana.
Ka ireo mpandraharaha rehetra momba ny Oratsimba izany dia tokony hanafoana ny tahiry na stock ao aminy alohan'io vanim-potoana io.
jeudi, 09 janvier 2020 15:10
Haino aman-jery: Atrikasa fampahafantarana ny fitsimbadihana ho amin'ny TNT
Tontosaina eto Ambositra, renivohitry ny faritra Amoron'i Mania, ny atrikasa iraisam-paritra ho fampahafantarana ny fitsimbadihana ho amin'ny TNT (Télévision Numérique Terrestre) eo amin'ireo fandraharana amin'ny haino aman-jery.
Ireo faritra rehetra atsimon'i Madagasikara, hatreo Antsirabe mianatsimo no mandray anjara amin'ity atrikasa fampahafantarana ity, ka ny minisitry ny serasera sy kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy no nitarika ny fotoana.
Hanomboka ny volana jona 2020 ny hampiharana ity teknolojia vaovao ity, saingy isan'ny nampahafantarina teto fa tsy an-tery ny fitsimbadihana amin'ity teknolojia ity fa malalaka ny mpandraharaha amin'izany.
jeudi, 09 janvier 2020 14:58
Mahajanga: Miditra amin’ny andro faharoa ny fitokonan’ny Lisea teknika
Mihidy ny vavahady ary nametraka sorabaventy eo ampidirana ny sekoly LTP ny fitakiana sy ny anton’ny fitokonana.
jeudi, 09 janvier 2020 14:34
Andry Rajoelina: Nofoanany ny dia saika hatao aty Mahajanga androany
Nanao fampitam-baovao ny teo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’i Mahajanga fa « voatery nanafoana ny fitsidihany aty Mahajanga ny Filoham-pirenena, izay tokony natao tamin’ity andro alakamisy ity noho ny tondradrano misy ao an-drenivohitra izay nahamoizana ain'olona ».
Nisy na izany aza ny fizarana fanampiana ho an’ireo traboina noho ny ranobe teto an-drenivohitr’i Boeny ny herinandron’ny taombaovao lasa iny, izay natao teo amin'ny EPP Fiofio androany maraina, izay notarihin’ny Lefitry ny Antenimieram-pirenena faritany Mahajanga, Rahantanirina Lalao na Ninà.
Ireo traboina namonjy ny "site d'hébergement" efa voasoratra anarana tamin’ny fotoan'ny voina no nisitraka ny fanampiana.
jeudi, 09 janvier 2020 13:35
Fambolen-kazo 2020: Hosantarina eny Tamponketsa Ankazobe amin’ny 19 janoary
Hatao ny 19 janoary 2020 izao ny fanokafana ny fambolen-kazo ho an’ny taona 2020, ka any Tamponketsa Ankazobe no hanatanterahana izany.
Miara-mandrindra ny fanatanterahana azy ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ary ny Fiadidiana ny Repoblika.
Efa mivonona amin’ity fambolen-kazo ity ihany koa ny foibe iraisam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Zanakazo an-tapitrisany no vokariny amin’ireo tanin-janakazo miisa telo ho fanatanterahana izany, toy ny ao Fanjahira, Kaominina Ifarantsa, Distrikan’i Tolagnaro, misy velarantany 10 hektara, ary efa misy zanakazo 3 tapitrisa vonona.
Misy tanin-janakazo ihany koa ao Mangarivotra ho an’ny Faritra Androy sy Namohora Farafangana ho an’ny Faritra Atsimo Atsinana, izay samy afaka mamokatra zanakazo 5 tapitrisa.
jeudi, 09 janvier 2020 13:31
Démolition bâtiment en ruine Hôpital Befelatanana
Démolition bâtiment en ruine Hôpital Befelatanana.
jeudi, 09 janvier 2020 10:38
Fahasalamana: Hisy lalàna mikasika ny « greffe d’organe » ary hatsaraina ireo hopitaly lehibe
Hisy ny komity hamolavola ny lalàna mifandraika amin’ny fanaovana grefy taova anatin’olombelona na “greffe d’organe”, hisy hopitaly hatsangana afaka manao an’io.
Betsaka ny olona no mila mandeha any ivelany no manao ny “greffe d’organe” nefa noho ny tsy fahampiana ara-bola dia maro ireo tsy misitraka izany, ka io no isan’ny antony nanapahana teo anivon’ny filankevitry ny minisitra voalohany tamin’ity taona 2020 ity ny famolavolana io fehezan-dàlana io.
Hanamboarana ihany koa ireo hopitaly lehibe eto Antananarivo renivohitra, indrindra ny fandraisana ireo vonjy taitra « service d’urgence » ao amin’ireo hopitaly ireo miaraka amin’ny fampitaovana mifandraika amin’izany.
jeudi, 09 janvier 2020 10:03
Olana ara-tany: Hatsangana ny « Tribunal terrier »
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny hananganana « Tribunal terrier », « hanafainganana ny fijerena ireo ady tany izay mihisatra eny anivon’ny Fitsarana ankehitriny ».
Betsaka loatra ny olana, na eo amin’ny halatra tany, na ny tsindry hazo lena eo amin’ny resaka fakana tany sy fibodoana ny tanin’olona, hoy ny fampitam-baovao, ka antony hananganana ity « Tribunal terrier » ity.
jeudi, 09 janvier 2020 09:42
Donald Trump: Nisafidy ny fitoniana
Taorian'ny daroka nataon'i Iranianina ny tobim-pamaharana amerikanina ao Irak ny alin'ny alarobia 08 janoary, taorian'ny fandevenana ny Jeneraly Qassem Soleimani, novonoin'ny amerikanina tao Bagdad Iran ny zoma lasa teo, dia nanao fanambarana ny filoha amerikanina omaly alarobia 08 janoary.
Nisafidy ny fitoniana i Donald Trump, na dia nandrangaranga ny tanjaky ny tafika sy ny fitaovam-piadiana ananan'ny amerikanina aza izany.
Tsy nisy miaramila amerikanina maty na naratra hoy izy tao amin'ny toby, ary fitaovana maivana no simba tamin'ny daroka misila nataon'ny iranianina.
Ny Amerikanina hoy izy dia manana solika, ary tsy mila ny solika iranianina, fa faizina ara-teokarena i Iran hoy izy mandram-panekeny ny fialany amin'ny programa nokleary.